Nouchenjeri: Maitiro Ekutyaira Zvakawanda B2B Inotungamira Ine LinkedIn Kutengesa Navigator | Martech Zone
Chitatu, Kurume 17, 2021 Chitatu, Kurume 17, 2021 Douglas Karr
LinkedIn ndiyo yepamusoro sosi yekudyidzana yeB2B nyanzvi munyika uye, zvine nharo, ndiyo yakanakisa chiteshi chevatengesi veB2B kugovera uye kusimudzira zvirimo. LinkedIn ikozvino yave nenhengo dzinopfuura hafu yebhiriyoni, iine anopfuura mamirioni makumi matanhatu evanhu-vepamusoro vanokurudzira. Hapana mubvunzo kuti muteveri wako anotevera ari paLinkedIn… ingori nyaya yekuti unovawana sei, batana navo, uye upe ruzivo rwakakwana rwavanoona kukosha mune chako chigadzirwa kana sevhisi.
Vamiriri vekutengesa vane yakakwira social network zviitiko vanowana 45% yakawanda mikana yekutengesa uye vane 51% vangango rova ​​yavo yekutengesa huwandu.
Chii chinonzi Kutengesa Zvemagariro?
Wakaona here kuti ini handina kutumidza zita rechinyorwa ichi Maitiro Ekutyaira Mimwe Inotungamira na LinkedIn? Ndiko nekuti kusakwana kweLinkedIn zvechokwadi kunoita kuti zvisakwanise kune nyanzvi yekutengesa kuti vawedzere zvizere chikuva chekutsvaga nekutsvaga kwavo kwavanotevera tarisiro. Iwe unogumira kune mangani mameseji aunogona kutumira mwedzi wega wega, mangani anotungamira iwe aunogona kusevha, haugone kuziva kuti ndiani akaona chimiro chako, hauna mukana kune chese chinhu chinowanikwa kuti utsvage, uye hauna mukana kune tarisiro kunze kwenetiweki yako iripedyo.
Nhanho 1: Saina Saina LinkedIn Kutengesa Navigator
LinkedIn Kutengesa Navigator inobatsira vashandi vekutengesa kunongedza vanhu chaivo nemakambani nekukanda mukati mezvakanaka tarisiro uye vanoita sarudzo. Ne LinkedIn Sales Navigator, vashandi vekutengesa vanogona kuwana ruzivo rwekutengesa kune runobudirira kutengesa, gara uine ruzivo uye up-to-date pamaakaundi ako uye zvinotungamira, uye kubatsira kubatsira kutonhodza kufona kuita hurukuro inodziya. Zvimiro zvepuratifomu zvinosanganisira:
Yepamberi Inotungamira uye Kambani Kutsvaga - inotungamira inotungamira kana makambani ane mamwe minda, kusanganisira hurefu, basa, saizi yekambani, jogirafi, indasitiri, nezvimwe.
Tungamira Mazano - Sales Navigator ichakurudzira vakaita sarudzo-ivo mukambani imwechete uye iwe unogona kugamuchira zvinotungamira pane desktop, nhare, kana neemail.
CRM Kubvumirana - Tora mukana weaka auto-inogarwa, akachengetedzwa maakaunzi uye anotungamira kubva kune yako pombi kuenda kune yako CRM yakagadziridzwa zuva nezuva.
Ne Sales Navigator iwe unogona nyore nyore kuteedzera zvinotungamira uye nehukama huripo, gara up-to-date pane vanobatika uye maakaunzi, uye shandisa chikuva kutarisira nyore.
Wana A Mahara Muedzo weLinkedIn Kutengesa Navigator
Nhanho 2: Gadzira Yako Tarisiro Rondedzero uye Nyora Yako Cold Kopi
Pane izwi ratinoshandisa paLinkedIn patinosangana nemumwe munhu uye tobva tarova nechinhu chisina kunaka, chekutumira meseji… Pitchslapped. Handina chokwadi chekuti ndiani akauya neshoko, asi zviri pachinangwa chaicho. Zvakafanana nekuvhura gonhi repamberi uye mutengesi anobva angosvetuka musuwo otanga kuedza kukutengesera. Ini ndinoti "edza" nekuti kushamwaridzana kutengesa hakunei nekukanda, zviri zvekuvaka hukama nekupa kukosha.
Chikwata cheCleverly inyanzvi pakunyora inotonhora kopi inobuda kopi iyo inowana mhinduro. Ivo kuraira kudzivirira izvi zvitatu zvikanganiso:
Usave usina kujeka: Dzivisa maindasitiri fluff mazwi uye utaure kune yakasarudzika niche, kuti iwe ugone kushandisa insider tarisiro tarisiro yekushandisa chaizvo Niching pasi zvakanyanya inosimudzira mhinduro mitengo.
Shandisa kupfupika: Chero chinhu chinopfuura 5-6 mitsara chinowanzo kuve skimmed pamusoro paLinkedIn, kunyanya kana uchitarisa parunhare. Udza waunogona kuva mutengi kuti ungaita sei kuti hupenyu hwavo huve nani mune mashoma mazwi sezvazvinogona. Mazhinji emaCleverly anonyanya kuita mameseji mitsara 1-3.
Ipa Zvemagariro Zviratidzo: Iyo yekutanga tarisiro yekufunga ndeyekusatenda iwe. Nekudaro, zvakakosha kune chero zita rinodonhedza vatengi vanozivikanwa, taura chaiyo mhedzisiro iwe yawakawana, kana kunongedzera kune chaiwo kesi zvidzidzo.
Nouchenjeri kunyora meseji zvinoteedzana zviri pachena, zvekutaurirana, uye kukosha-kunotyairwa kwako tarisiro.
Nhanho 3: Usarega!
Yese yakananga kushambadzira kushambadzira inoda akawanda akabata kuti apfuure kuenda kune iyo tarisiro. Tarisiro yako yakabatikana, vanogona kunge vasina bhajeti, kana vangangodaro vasina kufunga nezvekuwana chigadzirwa chako kana sevhisi. Ndicho chikonzero nei zvichikosha kuti iwe uve neyakaenzana, inofambiswa zvakanaka yekutevera-chirongwa. Kana uchinge wabatana newe, tarisiro inova yekutanga-degree yekubatana, uye iri mune yako netiweki nekusingaperi, saka unovarera pamwe nekutevera uye zvemukati.
Nouchenjeri inotumira 2-5 yekutevera mameseji kune tarisiro, saka ivo vanogona kupa yakawanda kukosha mukuteedzana. Semuenzaniso, kubata 3 kunowanzo kuve nyaya yekudzidza, kuratidza zviwanikwa zvako.
Nhanho 4: Scale Up Yako Yekutungamira Chizvarwa Nehunyanzvi
Kana izvi zvichinzwika zvinotyisa, ungangoda kuteedzera uchishandisa Nenjere. Nouchenjeri ine timu yayo pachayo uye chikuva kwavanonamatira netarisiro yako pachinzvimbo chako uye wozosaidzira zvinotungamira mubhokisi rako rekumiririra revatengesi uko kwavanogona kushanda kuti vavhare. Izvi zvinobvumira vatengesi vako kuti vaite izvo zvavanoita nemazvo… vachitengesa. Siya iyo kutengesa munharaunda Kuchenjera!
Iyo Cleverly dashibhodhi inokuratidza iwe yakagadziridzwa snapshot yeako LinkedIn mishandirapamwe, kusanganisira metric senge Connection Rate, Reply Rate, Yese Nhamba Yekukoka Yakatumirwa, uye Yese Nhamba Yevakapindurwa.
Chipenga cheCleverly chinobatana neLinkedIn kukupa iwe iri nani nzira yekugadzirisa, kuteedzera, uye kupindura kune tarisiro - kusanganisira yekudzvanya-uye-kutumira matemplate ekuchengetedza iwe maawa achipindura.
Iyo yeCleverly dashboard inoshanda seyakavakirwa-mukati LinkedIn CRM yekuchengeta tarisiro yetariro yako mukutengesa kutenderera. Sefa mameseji neMishandirapamwe, Matagi, Mhinduro yekupindura, Ziviswa, kana Kuverengwa kuti uchengetedze pombi yako yekutengesa yakarongeka, uye usazombopotsa mhinduro zvakare.
Wona rwekudyidzana ruzivo kune yega yega LinkedIn tarisiro uye yako yese LinkedIn yekutaurirana nhoroondo mune imwechete tebhu. Tora zvinyorwa pane chero tarisiro uye wobva wawedzera echinyakare ma tag echikamu chiri nyore uye nekutsvaga. Zvakare, rongedza mhinduro dzako kuti ubude panguva inotevera uye zuva kuti uwedzere kugadzirwa.
Sefa nyowani yeLinkedIn yekubatanidza nemazita, mushandirapamwe, ma tag, nzvimbo, zuva, email, uye nhamba yefoni. Export contact info uye dhawunirodha yekubatanidza runyorwa zvichienderana nemiparamende yako yekuwedzera kune yako CRM.
Kunyangwe Nouchenjeri achigadzira yako LinkedIn yekufambisa meseji, iwe unogona kugadzira tweaks uye kugadzirisa kubva pamushandirapamwe mhinduro. Kana uchida, unogona kutirovera runhare kuti tiongorore uye tipe mhinduro pane ako mameseji edhisheni.
Ita kuti mibvunzo yako ipindurwe, dzidza mashandisiro edhishibhodhi maficha, uye uwane nzwisiso kubva kumushandirapamwe wepamusoro-soro kushandura akawanda tarisiro.
Nouchenjeri ine chikuva chinokupa iwe yakagadziridzwa snapshot yeako LinkedIn mishandirapamwe, kusanganisira metric senge Connection Rate, Reply Rate, Yese Nhamba Yekukoka Yakatumirwa, uye Yese Nhamba Yevakapindurwa. Pese paunowana mhinduro yakanaka mubhokisi rako reIn LinkedIn, Cleverly anokuzivisa pakarepo kuburikidza neemail.
Wana Kutaurirana Mahara NaChenjera
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we LinkedIn Kutengesa Navigator uye Nenjere.
Tags: b2bb2b kutsvagab2b kutengesa munharaundazvine hungwarukutonhora kutsvagatsvaga zvinotungamirainmailenmailsLinkedInlinkedin sales navigatorKufungidzirakutengesa munharaunda
Agorapulse: Yako Yakareruka, Yakabatana Inbox YeSocial Media Management